राति अामासँगै सुतेकि ९ महिना बालिका अपहरण गर्ने कुन पशु हाे त्यो? – PathivaraOnline
Home > समाज > राति अामासँगै सुतेकि ९ महिना बालिका अपहरण गर्ने कुन पशु हाे त्यो?
admin September 13, 2018 समाज	0
पुनर्वास, भदौ २८ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा ९ महिने शिशुको अपहरण पश्चात उद्धार गरिएको छ । बुधबार मध्यरातमा आमासँगै सुतेकी एक नौ महिने बालिका अपहरणको ५ घन्टापछि प्रहरीले सकुशल उद्दार गरेको हो । बुधबार तिजका दिन नगरपालिका ८ स्थित कगाउँमा माइतीघर आएकी बेलु बिष्ट आफ्नी ९ महिने छोरी सरस्वतीसँग सुतेकी थिइन् । सँगै सुताएकि बालिका छोरी एकाएक गायव भएकाे जनाइएको छ ।
रातीको करिब २ बजेर ३८ मिनेट तिर निन्द्रामै रहेका बेला कुनै ब्यक्तिले आफ्नो छोरीलाई उठाएर लगेको थियो । मध्य रातमा आमासँगै सुतिरहेकी नौ महिने बालिकाको अपहरण भएको खबर पाउनासाथ घटना स्थल पुगेको ईलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवनबस्तीको प्रहरी टोलीले खोज तलास तिब्र बनाएको थियो ।
खोजीकार्यमा खटेको प्रहरीले बिहीबार बिहान ७ः४० बजे बालिकाको सकुशल उद्दार गरेको थियो । मध्य रातमा अज्ञात ब्यक्तिद्वारा अपहरित नौ महिने बालिका सरस्वती बिष्ट राती सुतेको मावली घर भन्दा झन्डै ५०० मिटर जनजागरण सामुदायिक वनको उत्तर तर्फ खोला नजिकै धानबारीमा फालिएको अबस्थामा प्रहरीले भेटाएर उद्दार गरेको हो ।
उद्दार गरिएकी बालिका सरस्वतीलाई बिहीबार कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी कुबेर कडायतको उपस्थितिमा पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर जीवनराज थापा, उप मेयर शारदा बिष्ट धामी , पत्रकारको रोहबरमा आमा बेलु बिष्टको जिम्मा लगाइएको हो ।
बालिका सरस्वतीलाई सकुशल उद्दार गरिए पनि आमासँगै सुतिरहेकी शिशुलाई कसले किन अपहरण गरि धान बारीमा फाल्यो अझै रहस्यमै रहेको छ । पुनर्वासमा आमाको आखमा सुतिरहेकी शिशुको अपहरण गरि लैजाने ब्यक्तिको प्रहरीले व्यापक खोजी कार्य तिव्र पारेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाहिरियो नेपालका ५ किशोरहरूलाई मुम्बईमा बन्धक बनाइएकाे सनसनी खबर
सिन्धुपाल्चोक पहिरोबाट बचेकि घाइतेले लगाए यस्तो आरोप!